IPL 2019 schedule puts Zimbabwe's India tour in jeopardy
IPL 2019 schedule puts Zimbabwe's India tour in jeopardy
Zimbabwe was supposed to play 1 Test and 3 ODIs against India in March.
The announcement of IPL 2019 schedule has put Zimbabwe's tour of India is in jeopardy. Zimbabwe was supposed to play 1 Test and 3 ODIs against India in March but with the confirmation of IPL 2019 calendar, the tour might be may be restructured, postponed or even cancelled.
India's tour of Australia and New Zealand culminates on February 10, after which Australia will visit India for two T20Is and five ODIs, slated to be held from February 24 to March 13. With this year’s IPL scheduled to start on March 23, there are only 10 days in between to host Zimbabwe.
As per a report in ESPNcricinfo, Zimbabwe Cricket managing director Givemore Makoni is expected to meet with his BCCI counterparts this week to discuss the various options including the cancellation of the solitary Test for T20Is and ODIs.
The ODI series against Zimbabwe is considered as a handy option for India to get their combination right ahead of the ICC World Cup 2019, scheduled to be held in England from May 30 to July 14.
India hasn’t hosted Zimbabwe in a bilateral series since 2002. Zimbabwe’s last three India visit are the ICC events –World T20 in 2016, World Cup in 2011 and the Champions Trophy in 2006.
IND v ZIM IPL 2019 Zimbabwe Indian Cricket Team BCCI Team India IPL